Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း)
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်းဆိုတာ မွေးရာပါချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပြီး အစာအိမ်၊ အူများနဲ့ တခြား ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ဝမ်းဗိုက်ရဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အပေါက်ကနေ အပြင်ဘက်ကို ထွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သန္ဓေသား ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာချိန်မှာ သားအိမ်ထဲမှာ မမျှော်လင့်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစာအိမ်၊ အူများနဲ့ တခြား အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ သန္ဓေသားရဲ့ ဝမ်းဗိုက်အပြင်ပိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားလာပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ဝမ်းဗိုက်နံရံဟာ ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖုံးအုပ်ပြီး ပိတ်သွားပါတယ်။ တခါတရံ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ချိန်မှာ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ဝမ်းဗိုက်ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုပေါ် မူတည်ပြီး ၂မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူတို့ကို omphalocele နဲ့ Gastroschisis လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Gastroschisis ပြသနာမှာ ဝမ်းဗိုက်နံရံဟာ မပိတ်တာကြောင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပမှာ ကျန်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Omphalocele မှာတော့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အချို့ဟာ ချက်ကြိုးနေရာပတ်လည်မှာ အပြင်ကို ထိုးထွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ omphalocele ဟာ အင်္ဂါအနည်းငယ်မျှသာ ထွက်နေတဲ့ သာမန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ အများစု ဒါမှမဟုတ် အားလုံးထွက်နေတဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ချို့ယွင်းခြင်းဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
တွေ့ရတာနည်းပါတယ်။ Omphaloceleဟာ မွေးကင်းစ ၁၀၀၀၀ မှာ ၂ ကနေ ၂.၅ ယောက်ထိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ gastroschisis ဟာ ပိုပြီး တွေ့ရများတယ်လို့ သုတေသီများက ဆိုထားပြီး မွေးကင်းစ ၁၀၀၀၀ မှာ ၂ကနေ ၆ဦးထိ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်းဟာ ပျက်ကျခြင်း၊ ကလေးအသေမွေးခြင်း စတဲ့ လစေ့အောင် မတည်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်မျိုးတွေမှာ တွေ့ရပိုများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုသိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သန္ဓေသားလောင်းဆီမှာ ချို့ယွင်းမှုရှိကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူသိနိုင်လောက်အောင် မသိသာပါဘူး။
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မွေးဖွားစဉ်မှာ ပါလာမယ့် ချို့ယွင်းမှုတွေရဲ့ အကြောင်းအရင်းကို သေချာစွာ မသိရသေးပါဘူး။ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်းရဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း မသိရသေးပါဘူး။
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သင့်တော်သော စားသောက်မှုပုံစံများ မရှိခြင်း
ဗီတာမင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အခြားဖြည့်စွက်စာများ မစားသုံးနိုင်ခြင်း
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မွေးခါစကတည်းက ချက်ရဲ့အရင်းမှာ စူထွက်ပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတချို့ပါ ထွက်နေတတ်တာကြောင့် ဒီရောဂါဟာ ထင်ရှားသိသာပါတယ်။
ကလေးမမွေးမီ အာထရာဆောင်းရိုက်ရင် ချို့ယွင်းမှုကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ တခြားမွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှုတွေပါ ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Abdominal Pain (ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တခြားချို့ယွင်းမှုတွေမရှိရင် ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမုနည်းလမ်းကို ပြင်ဆင်ခြင်း/ ပိတ်ခြင်းလို့ ခေါ်ဝေါ်ပြီး သိပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးမှု မရှိပါဘူး။ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများဟာ ပုံမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာမှားနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဝမ်းခေါင်းက ကျဉ်းနေပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေက ကြီးမားနေရင်၊ အရေပြားကို ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ ဖောင်းနေရင် ကလီစာတွေဟာ ပုံမှန်အတိုင်း အထိုင်ကျဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များဟာ ကလီစာတွေကို ဖုံးထားနိုင်မယ့်အိတ်ကို ဗိုက်အပြင်ပိုင်းမှာ စွပ်ထားပေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအိတ်ဟာ အပူချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ရောဂါပိုးမဝင်နိုင်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိတ်ဟာ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်ပြီး ဝမ်းဗိုက်နံရံအတွင်းပိုင်းနဲ့ ချုပ်ရိုးမရှိဘဲ တွယ်ဆက်ထားနိုင်ပါတယ်။ အိတ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းဟာ မတ်မတ်ထားတာမို့ အူများဟာ ဝမ်းခေါင်းထဲကို မြေဆွဲအားနဲ့ ဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ တပတ်လောက်ကြာနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးပိတ်ဆို့ခြင်းကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ခွဲစိတ်မှုတွေ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက ဝမ်းဗိုက်နံရံ ချို့ယွင်းခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
ချို့ယွင်းချက်အချို့ဟာ ကိုယ်ဝန်စတင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ သေချာစွာ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ဗီတာမင်များ သုံးစွဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော နေထိုင်မှုပုံစံများ လိုက်နာခြင်း၊ မလိုအပ်သော ဆေးဝါး ဓါတုပစ္စည်းများ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Abdominal wall defect. http://www.healthofchildren.com/A/Abdominal-Wall-Defects.html . Accessed May 12, 2017.
Abdominal wall defect. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/abdominal-wall-defect . Accessed May 12, 2017.
Abdominal wall defect. http://www.merckmanuals.com/home/children-s-health-issues/birth-defects-of-the-digestive-tract/abdominal-wall-defects-omphalocele-and-gastroschisis . Accessed May 12, 2017.
Abdominal Muscle Deficiency Syndrome (ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ချို့တဲ့ခြင်းရောဂါစု)